Ahoana ny fitsidihana fiaran-dalamby ao Shina mba tsy ho voampanga ho manao fitsikilovana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2019 4:23 GMT
Raha hijery sy maka sary fiaran-dalamby ao Shina ianao dia mila mitandrina, raha tsy izany ho voampanga ho mitsikilo indostria, araka ny filazan'ilay mpijery sy maka sary fiaran-dalamby malaza sady mpisera YouTube, RailKingJP.
Lahatsary iray hafa no mandrakitra ny fikasany hahita ireo fiaran-dalamby mandeha amin'ny etona mamoaka setroka manidina avy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra. Toa zavatra tsara jerena ny”rahona olatra”:
Tahaka ireo mpijery fiaran-dalamby marobe, voasarika hanaraka sy handrakitra ireo fiaran-dalamby tsy fahita firy i RailKingJP, matetika avy amin'ny toerana fijerena fiaran-dalamby “mahazatra” manodidina an'i Japana. Nampiditra lahatsary vitsivitsy amin'ny endrika mahazatra amin'ny karazana antsoina hoe “tazana anoloana” (前面展望, zenmen toubou) ihany koa izy. Ny “tazana anoloana” nampidirin'ireo mpankafy lalamby no fomba tsara indrindra hitrandrahana ny rafitra lalamby ao Japana amin'ny alalan'ny Youtube.
Ity ny dian'i RailKingJP farany niainga tao Shinjuku ao Tokyo ho any amin'ny toeram-pitsangatsanganana ao Hakone, araka ny hita eo anoloan'ny varavarankelin'ny Fiara mahafinaritra Odakyu Romance: